Ramadan 2020 Somalia Calendar Timings ~ Ramadan Calendar 2020
Ramadan 2020 Somalia Calendar Timings
The holy month of Ramadan is approaching and as Muslims, all around the world, it is very important for to find the accurate Suhoor o iftar timings in each country we live. If you want to spend your Ramadan in Somalia whether you are Sunni or Shia you should celebrate it with prosperity and peace. Islam is a religion that is spread all over the world because of Muslims and should perform their duties with a pure heart.
As of now the exact population of Muslims in the country of Somalia is almost 80% both Sunnis and Shias lives along with Ahmadis and Maliki in small groups. If you are looking for the right Ramadan Calendar 2020 for Somalia online then here you will get it with an updated timetable.
Here is the list of ten major cities of Somalia with minimum Muslim population I numbers:
When is Ramadan 2020 in Somalia
Ramadan 2020 in Somalia will In Sha Allah start on Friday, April 24, 2020, and will end on Sunday, May 24, 2020.
Ramadan Decorations Somalia
Suhoor And Iftar Timings Somalia 2020
Below is The Ramadan 2020 Calendar Somalia.
Also, the below calendar contains Suhoor and Iftar Timings Somalia.
Ramadan Calendar Tanzaniza
Ramadan Calendar Singapore
Ramadan Calendar Slovenia
Sida aad u dabaaldagayso bisha Ramadaan ee 2020 Soomaaliya. Sidaas awgeed waa muhiim in la baro taariikhda iyo muhiimada bisha Ramadaan. Ramadan waa bilo muhiim u ah dhamaan Walaalaha muslimiinta ah ee adduunka ka jira. Waxay noqon kartaa bisha bilawga ah ee dadka aan Muslimiinta ahayn, laakiin bishiiba oo muhiim ah oo Muslimiin ah.
Qaar badan oo idinka mid ah ayaa ogaanaya taariikhda bisha Ramadaan laakiin weli, waxaa jira walaalo badan oo walaashiis ah oo aan garanaynin taariikhda bishan barakaysan. Tani waa masuuliyaddayada inaan Islaamka la wadaagno dhammaan dadka aduunka.
Ramadan waa bisha 9aad ee taariikhda diinta Islaamka. Ereyga Ramadaan macnaheedu waa micnaheedu waa xayawaan carabi ah. Waxaa loo aasaasay sida Bil kasta Quduuska ah ee Muslimiinta ka dib markii Quraanka loo soo diray Nabiga 610-kii CE, munaasabadda loo yaqaano Laylat al-Qadr, oo inta badan loo tarjumay "Habeenka Awooda.
Ramadaan waa bilo muhiim ah oo waa bisha kaliya ee sannadka abaalmarinta la laba jibbaarayo iyo saddex laab.
Sida Quraanka kariimka
"Bishii Ramadaanka [waa] taas oo lagu soo dejiyey Quraanka, Hanuuninta dadka iyo caddaynta hanuuninta iyo shuruudaha. Ee ah kuwa dhadhamiya Cadaabka Maalinta Qiyaamaha intaas ka dib. iyo ciddii xannuunsanaysa ama safar - ka dib marka la barbar dhigo maalmo kale. Eebana wuxuu idiin ku yeedhi Janno iyo Dambidhaaf idinkiisa, wuxuuna idiin dardaarmay inaad addeecdaan (Nabiga) oo Eebe ka soo hadhay uu idiin toobad keeno wuxuu idiinka digi Eebahaana waa Falsame Oge ah.
Qaamuuska Muhiimka u ah Bilaha Ramadaan:
Waxaad ka warqabtaa Faderka, laakiin aan u sheego kuwa aan ka hadleynin. Muslimiintu waxay ka sarraysaa qorrax dhaca ilaa Dawn. Waxaa jira waqtiyo kala duwan oo Dawn iyo Sunset ah ee dalalka kala duwan. Sidaa darteed mudada dhakhso ah way ka duwan tahay waddamada kala duwan. Waxay ku kala duwanaan kartaa 15 saacadood. Ilaa 21 Hr.
Waxaad dhihi kartaa soonka waa laf dhabarta bisha Ramadaan. Jacaylku macnaheedu maahan inuu weli ka gaajoonayo waaberiga illaa qorrax-dhaca, laakiin waa inaad samaysaa wax-qabadka wanaagsan maalinta oo dhan. Iska hubi inaadan qofna waxyeelaynin, ha sheegin been, ha isticmaalin luqad xadgudub leh, ka fogaato galmada iyo waxyaabaha kale ee xun. Si kale loo dhigo waa inaad si dhaqso ah afkaaga, dhegahaaga, gacmahaaga iyo indhahaaga u ilaalisaan.
Suhoor, oo la cuno Sahar waa cunnida ugu muhiimsan ee ku taalla bartamaha Ramadaanka. Iyo sida aad isugu dhigtay xilli ciyaareedkan yaabka ah iyo dhaqankeeda caadiga ah, mid ka mid ah arrimaha ugu khatarsan ee aad ka dhigi karto mid kasta oo suuragal ah in aan la iloobin waa muwaadin Musaharati ah - ninkii gashan qaabka Suhour dhuujin lahaa duufkiisa.
Cuntada aan cunno subaxda waxaa la yiraahdaa suhoor. Suhoor waa sunnah. Suufka, waxaad u baahan tahay inaad cuntid cuntada nuujiya oo caafimaad leh. Iska ilaali cuntooyinka basbaaska leh. Isku day inaad cabto biyaha badan inta aad awooddo.
Talooyin iyo raashin aad ku cuni karto suhoor waxaad ka heli kartaa internetka.
Dhibaatadu waa waxa ay dhammaantood si xamaasad ah u sugayaan! Gaar ahaan carruurta waxay si xamaasad leh u sugayaan. Iridda, qoys kasta wuxuu sameeyaa cuntooyin wanaagsan oo raashin leh. Laakiin waxa muhimka ah ee la daryeeli karo waa in la daryeelo dadka kale. Isku day inaad la wadaagto kuwa aan awoodi karaynin cunto wanaagsan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan bisha Ramadaan waa in ay daryeeshaan dadka kale oo ay u noqdaan kuwo mughfirat ah dhammaan Muslimiinta. Alle ayaa ina siiyay farxadda Ciidul Fitriga ka dib bisha Ramadan. Si aad abaalmarin u heshid aduunkoo dhan, dabcan waxaa abaalmarin ka ah Jannah.